တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ကြေကွဲ ကျောက်ပျဉ်
Posted by မေဓာဝီ at 5:15 PM
အမိမြေက လွမ်းစရာတွေထဲမှာ သနပ်ခါးနဲ့ ကျောက်ပျဉ်လဲ ပါတယ်။ တကယ့်ကို လွမ်းတာ... :(
1/23/2013 5:44 PM
သက်တမ်းရင့် ကျောက်ပျဉ်ကြီး ကွဲသွားတာ နှမြောစရာ မမေရယ်...၊ အမေသိရင် ဘာပြောမလဲ မသိဘူးနော်..၊း)
ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်ကတော့ မုံရွာထွက် ကျောက်ပျဉ်တွေအကြောင်း ကဗျာလေး ရွတ်ခဲ့ရဖူးတယ်၊ ဘာပဲပြောပြော အခု ကျောက်ပျဉ် အသစ်လေးက စစ်ကိုင်းသားပီပီ ကျစ်လစ်အေးမြခြင်းတွေ ယူဆောင်လာပေးလို့ တော်သေးတာပေါ့...၊း)
တစ်ခုပဲ... သနပ်ခါးလူးထားတဲ့ ကျောက်ပျဉ်ပိုင်ရှင်ကို မတွေ့ရလို့ သနပ်ခါးအထွက် တကယ်ညက်ရဲ့လား ဆိုတာတော့ စောကြောချင်စရာ ...။း))
ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ပိုင်ရှင်ရွေးချယ်ခွင့် မရှိတဲ့...
ကျောက်ပျဉ်လေးက သခင်မအလှအတွက် သူနိုင်သလောက် ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့ ....
အများကြီးထဲကမှ ရွေးယူဝယ်ယူ သုံးစွဲခံခဲ့ရတဲ့
သုံးနေတဲ့ သခင်မလှဘို့ အတွက် သစ္စာရှိစွာ ကူညီပါလိမ့်မယ် ...ညီမမေ၊။
1/23/2013 9:16 PM
သနပ်ခါးကလည်း ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရွာက ရာသီဥတုနဲ့မှ ကိုက်ညီတာ
အခုခေတ်ကျောက်ပြင်တော်တော်များများကအင်ဂတေနဲ့လောင်းထားတဲ့ကျောက်ကျဉ်တွေများပြီး သွေးလိုက် ရင်အဖတ်တွေနဲ့သနပ်ခါးတွေထွက်လာတာ
ကျောက်သားကောင်းမှ သွေးရတာလွယ်ပြီး ထွက်လာတဲ့သနပ်ခါးကလည်းညက်နေပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုကျောက်ပြင်မျိုးရဖို့ခက်ပါတယ်။ ကျောက်သားချောလွန်းပြီး တစ်မျက်နှာစာရဖို့လက်ညောင်းအောင်သွေးရတဲ့ကျောက်ပျဉ်တွေကျ တော့လည်းခြေဆုံးခေါင်းဆုံးလိမ်ချင်ရင် အနှိပ်သည်အရင်ခေါ်ထားရမယ် (အခုခေတ်အနှိပ်သည်ကောင်းကလည်းရှားမှရှား)။
1/24/2013 7:16 AM
ဘိလပ်ကပဲပြုတ်ပိုကောင်းတယ်ရေးတုန်းကတော့ ဘရောင်ချိန်းသွားပြီထင်တာ။ ဒီတစ်ခါကျောက်ပြင်မှာတော့ စစ်ကိုင်းကျောက်ပြင်နဲ့အဆင်ပြေတာသိရလို့ဝမ်းသာပါတယ်။ ကျုပ်တို့ မြန်မာပြည်သားတွေက ဘဝင်မြင့်သလိုလို ရူးတောတော ပေါချာချာမြင်ရရင် သိပ်စိတ်မသက်မသာဖြစ်ရတာကလား။ (Muzit)
who is Muzit?
you are the owner of http://www.z-thegardener.com?
I don't care whatever and wherever you comment, but your fake ID irritate me. Don't show the ladies your hidden fist while covering yourself with 'hta mee'. beaman, guy. LOL
ကြေကွဲကျောက်ပျဉ်ခမြာ ကြေကွဲစရာပါလား အစ်မမေရာ၊
သူတို့တွေက သူတို့ကျောက်ပျဉ်တွေကို သိပ်တွယ်တာ
တာရယ်....၊ခုလည်း အစ်မအမေသာ ရှိရင်တော့ ဘာ
1/24/2013 9:01 AM
မမေပို့စ်လေးကိုဖတ်ပြီး သနပ်ခါးနံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ ပါးပြင်ပေါ်အေးခနဲအရသာမျိုးကိုရလိုက်တယ်...။
1/24/2013 9:06 AM
ကျောက်ပျဉ်ချောနေလို့ သနပ်ခါးကောင်းကောင်းမထွက်ရင် ကျောက်ပျဉ်ပေါ်သဲနဲနဲတင်ပြီး အပွေးမရှိတဲ့သနပ်ခါးတုံးနဲ့သွေးရင်ကောင်းသွားကော။
သနပ်ခါးလေးတွေနဲ့ ချစ်စရာကောင်းနေမဲ့ မမေကို မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်တယ်
အဲ မွှေးလဲ မွှေးနေမှာနော်. ပိုစ့်လေးက တကယ်ကို ချစ်စရာလေး
ကျနော်နိုင်ငံခြားမှာကျောင်းသွားတက်တုန်းကလည်း ဝက်ခြံပျောက်ချင်လို့ ကျောက်ပျဉ်သေးသေးလေးနဲ့ သနပ်ခါးတုံးလေးကို မရမက သယ်သွားခဲ့ဖူးတယ်..အမှတ်ရသွားလို့ပါ
1/24/2013 11:36 PM
ဆို - black hole
present from me :)
1/25/2013 2:57 PM
မမေပို့ စ်ကို ဖတ်ပြီး သနပ်ခါးသွေးလိမ်းချင်စိတ် ပေါက်တယ်..
အညာသားဆိုတော့ ဦးဟန်ကြည်လည်း သနပ်ခါး ကြိုက်သပ...တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘ၀အထိ ကျောင်းသွားရင် သနပ်ခါးလေးတော့ လူးသွားလိုက်ချင်သေးတာ...သို့ပေမင့် ကျောက်ပြင်ကွဲတာတော့ တစ်ခါမှကို မကြုံဖူးတာရယ်...မန္တလေးမှာတော့ မုံရွာနယ်ကလာတဲ့ ကျောက်ပြင်တွေကို အသုံးများတယ်လို့ ထင်တာပါပဲ...သူရို့ကျောက်ပြင်က ကျောက်သားကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နဲ့မို့ သနပ်ခါး အသားလည်းညက်သလို အကြမ်းလည်း ခံသဗျား...
သည်ဘက်နယ်ရောက်တော့ သနပ်ခါးကလည်းရှား...သည်ကြားထဲမှာ အတုကလည်းများနေတော့ သနပ်ခါး ပြတ်ကရော...ကိုယ့်ဆီမှာဆိုရင် သနပ်ခါးကို အပေါ်က အပွေးပဲလိမ်းပြီး အသားကို လွှင့်ပစ်လိုက်ပေမယ့် သည်ဘက်ရောက်မှ တစ်တုံးလုံးကုန်အောင် သွေးလိမ်းကြတာ ထူးထွေတည့်အံ့ရာသော ဖြစ်ရော...
ပိုပြီး ထူးဆန်းတာက အထက်တန်းကျောင်းက ကျောင်းအုပ်ဆရာမက ကျောင်းသူလေးတွေကို သနပ်ခါး မလိမ်းခိုင်းဘူးဗျား...သနပ်ခါးလိမ်းလာရင် ပါးပိတ်ရိုက်မယ်လို့ချည်း ကြိမ်းနေတော့ မခက်လား...
1/27/2013 6:47 AM
မေဓါဝီ ရဲ့တွေးမိတွေးရာ ---ရေးမိရေးရာဘလောက်ကတော့ ကျွန်တော်အမြဲ မှီငြမ်းကိုးကားနေရတဲ့ဘလောက်တစ်ခုပါဘဲ တော့ကိုချီးကျူး ဂုဏ်ယူမိတဲ့ဘလောက်တစ်ခု မို့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းမှတ်တမ်း တင်ပါတယ်
မောင်သုည ( အဟောင်းဆိုင် )
7/03/2013 12:25 PM